SomaliTalk.com » Ogeysiis Muhiim ah – APTEN Media
Bahda shebekedda caanka ah ee Aftahan oo sagaal sano jirtay waxay dadweynaha Soomaalida ah ku wargelinaysaa inay ku soo kordhisay adeeggii hore ee suugaanta, afka iyo qoraallada ahaa– qayb cusub oo wararka ah – Aftahan Press iyo Wargeys la mataanno ah oo UK ka soo baxa – The Enterprise Newspaper.
Aftahan Press & The Enterprise Newspaper, (APTEN) waa saxaafad internetka iyo wargeys isugu jirta oo ku soo korodhay saxaafadda Soomaalida. Aftahan wuxuu jiray muddo sagaal sano ah, si fiicanna waxa loogu bartay kaydinta suugaanta iyo afsoomaaliga, Wargeyska The Enterprise waa wargeys bille ah oo ka soo baxa UK, waa 32 bog, waxaana la soo daabacaa 22,000 xabbo bil kasta, waxaanu tagaa magaallo kasta oo ka mid ah UK, afsoomaali iyo Ingiriisi baana lagu qoraa. Aftahan Press, qoraallada, wararka iyo warbixinna lagu soo qoro ayaa lagu soo daabacaa wargeyska, waxaana ka daalacan kartaan mareegta www.enterprisenewspaper.org.
Bahda, Aftahan Group, waxay qaybtii suugaanta, buugta iyo afsoomaaliga u wareejisay www.aftahan.org, – qaybta wararkuna waxay lagu soo qorayaa www.aftahan.com
Bahda Aftahan waxa lagu tixgeliyaa dhexdhexaadnimo,aqoon sare, karti iyo kasmo guud, waxay idiin ballan qaadayaan inay ku shaqayn doonaan ceeb iyo caadifad la’aan, Waxayna idiin soo tebin doonaan war sugan, qoraal tafaftiran, warbixin tayo leh, karti iyo kasmo sare ku dhisan.
Haddaba, ha moogaanina, qaybta wararka ee Aftahan Press oo aad ka daalacan kartaan mareegta www.aftahan.com – iyo – Wargeyska The Enterprise Newspaper oo aad ka akhrisan kartaan www.enterprisenewspaper.org
Yasin Jama Nux (Suldaan)
Tafaftiraha Guud ee APTEN